एमाले छाडेका बामदेव यता न उता : समाजवादीको बैठकमा यसकारण गएनन् ! - Kantipath.com
नेकपा एमाले छाडेका बामदेव गौतम अझै कता जाने टुंगोमा पुगेका छैनन् । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने चर्चा थियो । बामदेवले एमाले छाडेको घोषणा गर्नुलाई उनी सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जान लागेको औल्याइएको थियो । तर, नेकपा एस अझै सरकारमा नगएकाले छिनोफानो भएको छैन । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनका लागि आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई आजभोलिमै पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ । अध्यादेश संसद्बाट फिर्ता तथा राष्ट्रपतिलाई खारेजी सिफारिस गर्ने काम सरकारका तर्फबाट हुनेछ ।
गौतम नेकपा एसमा महत्वपूर्ण पदसहित जाने चर्चा चलेको धेरै भइसकेको छ । तर, उनी अगाडि बढेका छैनन् । आखिल बामदेव किन रोकिए ? विश्वस्त स्रोतका अनुसार गौतमले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यनीतिबारे स्पष्टता खोजेका छन् । उनले मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएका छन् ।
नेकपा एसको कार्यनीति जनताको बहुदलीय जनवाद नभई जनताको बहुदलीय समाजवाद हुने स्पष्ट भइसकेको छ । गौतम जबसमा सहमत भएपनि मागदर्शक सिद्धान्त जबज हुनुपर्ने अडानमा रहेको बुझिएको छ । समाजवादीको प्रतिवेदन लेखन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले भने बामदेव एक जनाका लागि जबज मान्न नसकिने बताएका छन् ।
गौतमले सम्मानजनक पद तथा जिम्मेवारीको विषय पनि उठाएका छन् । उनले सहअध्यक्ष चाहेको बुझिएको छ । सरकारमा आफू जाने या आफूनिकट सांसदलाई पठाउने उनको चाहना बुझिएको छ । यसकारण उनी नेकपा एसमा पस्न रोकिएका छन् ।
Previous Previous post: भोली महासचिव, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो टुंगो लगाउदै एकीकृत समाजवादी
Next Next post: तालपोखरामा डुङ्गा चल्यो
कण्डमको साटो प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरेपछी…..
अनौठो प्रतियोगिता : कारलाई ५० घण्टासम्म चुम्बन गरेर जयसूर्याले कार जितिन्
यी अनौठो जोडी ५० वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा, असि बर्षमा बिबाह !
२०० वर्ष अघि देखिको वेश्यालय !